Ilaha cusub ee tamarta aan la aqoon | Cusbooneysiinta Cagaaran
Ereyga gadaashiisa methanization wuxuu qarinayaa geedi socodka dabiiciga ah ee xaalufinta maadada dabiiciga iyadoo maqnaanshaha ogsajiinta. Tani waxay soo saartaa gaas iyo sidaas darteed tamarta. Shirkado badan ayaa maanta adeegsada farsamadan si ay uga takhalusaan qashinkooda, iyagoo u adeegsanaya ilo cusub oo aan la garanayn oo laga helo tamar xiiso leh.
1 Qaraha qurmay
2 Karootada qurmay
3 Tamar farmaajo
4 Saxarada Aadanaha
Xilli kasta, shirkad miro ku taal Faransiiska waxay heshaa 2000 tan oo ah qaraha in aysan iibin karin. Si kastaba ha noqotee, maareynta qashinkaani waxay leedahay qiyaastii of 150.000 sanadkiiba gaadiid iyo daaweyn. Sannadkii 2011, shirkaddu waxay heshay qayb ka mid ah habka wax-ka-beddelka oo ay soo saartay shirkad reer Beljam ah, GreenWatt. Mabda'a waa mid fudud. Miraha burburay ama qurmay waxaa la dhigaa meel ay ku duleelaan bakteeriyada bixisa gaaska noolaha. Tamarta la soo saaray ayaa dib loo iibiyaa, halka kuleylka lagu isticmaalo gudaha warshadda lafteeda.
Mabda 'isku mid ah ayaa ku dhaca dabacasaha. Koox Faransiis ah, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha reer Yurub ee beerashada karooto, oo la daah-furay sanadkii 2014 qayb ka mid ah biomethanization, oo ay sidoo kale soo saartay shirkadda GreenWatt. Kooxdu waxay soo saartaa tamar u dhiganta 420 guri.
Cheese sidoo kale wuxuu leeyahay hanti aan la hubin. Midawga wax soosaarayaasha aaga Savoy, France, ayaa daah furay Oktoobartii lasoo dhaafay cutub loogu talagalay isbadalka whey, dareeraha huruudda ah ee soosaara farmaajo. Soosaarka subagga ka sokow, cunsurkani wuxuu kaloo yahay isha tamarta iyadoo loo marayo habka metkacsasho. Cutubkani waa inuu oggolaadaa soo-saaridda ku dhowaad saddex milyan oo kWh oo tamar ah sanadkiiba, taas oo ah, u dhiganta isticmaalka korantada ee dadka deggan 1500.
Bas aad u qaas ah ayaa ku socdaala waddooyinka Bristol, In England. Asalka baabuurku waa inuu wareego iyada oo ay ugu wacan tahay saxarada aadanaha. Waa shidaal cagaaran tan iyo markii uu soo baxo 80% kaarboon laba ogsaydhka iyo inta udhaxaysa 20 iyo 30% dioxide kaarboonka ka yar mishiinka naaftada. Biobus-kani wuxuu u safri karaa 300 km iyada oo ay ugu wacan tahay saxaro dabiici ah oo dabiici ah sanadkiiba 5 qof. Iyagoo wajahaya guusha mashruucooda tijaabada ah, shirkadda GENeco ayaa hadda bilaabay codsi ku saabsan maalgelinta Dawladda si loo horumariyo shabakaddeeda tamarta nadiifka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Biofuels » Biogas » Ilaha tamarta cusub ee aan la aqoon
Waxa jira faa iidooyin badan oo gaaska noolaha. Waxaa loo isticmaali karaa inay ahaato mid tamar bixiya saacadaha ugu badan ee shaqada, maxaa yeelay uma baahna qorrax ama dabeyl inay soo saarto umana baahna baytariyada inay isku soo ururiso.
Ku jawaab casasalameda